कोरोनासँगै नजिकीएको दशैँ : ‘सपिङ’ गर्न ग्राहक नआउँदा कुरेको कुर्‍यै भृकुटीमण्डपका व्यापारी ! « Lokpath
२०७७, २९ आश्विन बिहीबार १३:२३
कोरोनासँगै नजिकीएको दशैँ : ‘सपिङ’ गर्न ग्राहक नआउँदा कुरेको कुर्‍यै भृकुटीमण्डपका व्यापारी !
प्रकाशित मिति : २०७७, २९ आश्विन बिहीबार १३:२३
काठमाडौं । काठमाडौं लगायत देशका मुख्य – मुख्य शहरहरुमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दो रुपमा छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्नका निमित्त लकडाउन (निषेधाज्ञा) पनि गर्‍यो । तर कोरोना संक्रमित दैनिक हजारौँको संख्यामा बढिरहेका छन् ।
हाल नेपालमा १ लाख १७ हजार ९ सय ९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने ८० हजार ९ सय ५४ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । त्यस्तै कोरोना भाइरसका कारण ६ सय ७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । (यो समाग्री तयार पार्दासम्म)
कोरोना महामारीकैबीच दशैँ नजिकिँदै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक भन्दा अरु कामले घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।
मानिसहरुको धेरै चहलपहल हुने भृकुटीमण्डपको बजार २७ गते बाट खुलेको छ । चाडपर्वमा मात्र नभई सधैजसो भिडभाड हुने भृकुटीमण्डपको बजारमा यसपाली चाडपर्वसँगै कोरोनाको भयावह पनि मिश्रीत छ । व्यापारीहरु डराई-डराई सामान फुकाउछन् ।
मध्यम र निम्न वर्गीय ग्राहकहरुलाई लक्षित भृकुटीमण्डपको बजारभित्र कपडा, जुता, ब्याग, कस्मेटिक पसलहरुका स्टल छन् ।
भृकुटीमण्डपमा दशैँको किनमेलका लागि एक महिना अघिदेखि ग्राहकहरु आउने गर्थे ।
चाडबाडको बेलामा उपत्यका बाहिर जानेहरुले पनि केडी सातादेखि नै सामान किन्ने गर्दथे तर कोरोनाका कारण अहिले कुनै दिन बोहनी पनि नहुने व्यापारीहरु सुनाउँछन् ।
सधैजसो दशैँको समयमा मानिसहरुको भिड हुने र व्यापार पनि राम्रो हुने भृकुटीमण्डपका व्यापारीहरु यसपालि दशैँको माहोल आइसक्दा पनि ‘बोनी’ गर्न पाइयो भने पनि चित्त बुझाउनपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
मौसम सफा भएपछि काठमाडौंबाट देखिएका हिमश्रृङ्खलाहरु
काठमाडौं । मौसम सफा भएपछि काठमाडौं उपत्यकाबाट उत्तरी क्षेत्रमा रहेका हिमश्रृङ्खलाहरु सगरमाथा, मनास्लु,
नेपाली फुटबल टिम ‘इज ब्याक’ ! (तस्वीरमा हेर्नुहोस्)
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले प्रशिक्षण शुरु गरेको छ । बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण
सुनसान दरवारमार्ग, दशैँमा पनि छैन चहलपहल
काठमाडौं । नेपालीको महान पर्व दशैँ शुरु भएको आज १३ औंँ दिन ।
सररर चचहुईई (फोटोफिचर)